Kwiqula elidala igumbi 2 imizuzu ukusuka A20! - I-Airbnb
Kwiqula elidala igumbi 2 imizuzu ukusuka A20!
Wamkelekile ekhayeni lam! eVieux Puits, yiza uzokuphumla kweli gumbi leendwendwe lilula kwikona encinci yelali enembonakalo entle. Ifakwe ekuphumeni kwendlela yemoto i-A20, eli gumbi liya kukunika yonke intuthuzelo eyimfuneko yokuhlala kwakho kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwigumbi lokuhlambela labucala kunye neWC.
Kule lali yamaxesha aphakathi, uya kufumana iivenkile ezininzi: iivenkile zokutyela, i-hypermarket, ikhemesti...
Igumbi elikwindawo ezolileyo, enoxolo kunye nekhululekileyo yasemaphandleni embindini weebhokhwe kunye nezinye izilwanyana zasekhaya. Ibekwe kwindlela yeenyawo, unokwenza uhambo olumangalisayo olunemibono egqwesileyo. IMazières yindlu encinci eneendonga zamatye ukufumana ngaphandle kokulibazisa.
Egumbini, unekofu, iti ye-herbal kunye neti kodwa isidlo sakusasa esigcwele ngokupheleleyo sinokunikezelwa kuwe kunye ne-5 euros ngomntu ngamnye kodwa kuphela ngeempelaveki kunye neeholide zesikolo. Iipleyiti kunye ne-cutlery zibonelelwa, kunye nefriji encinci kuwe. Ukukwazi ukusebenzisa i-microwave yam.
Ungalibazisi ukundibuza, kuxhomekeke ekufumanekeni, ngobusuku besibini ngezinga elikhethekileyo!
Ukuhamba iiyure ezili-10 ubuninzi.
Igumbi elikwindlela yabahambi ngeenyawo, evumela ukuhamba okuhle. Kuzolile, phakathi kwezinye izilwanyana zasekhaya (inja, iikati, iinkukhu kunye neebhokhwe). Usentliziyweni yelali ngelixa ukufutshane kakhulu kuhola wendlela i-A20 esebenza eLimoges, eBordeaux, eToulouse okanye eClermont-Ferrand.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Donzenac